Helena Tur. Kubvunzana nemunyori weRopa Rakaipa | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo: neruremekedzo rwaHelena Tur.
A Helena Tur inozivikanwa zvakare se Jane kelder, iro zita rekunyepedzera raakasaina mazita mazhinji e nyaya dzerudo set munguva ye Regency yeBritish muzana ramakore rechiXNUMX, nekuda kwekuda kwake mabhuku echiRungu ezana ramakore. Mudzidzisi, ikozvino pazororo kunyora, kusaina wekutanga nezita rake, Ropa rakaipa, yakaburitswa gore rapfuura. Akave ane mutsa zvakakwana kuti andipe iyi hurukuro kwaanotiudza nezvake nezvose zvishoma.
Helena Tur - Kubvunzana
BHUKU NEWS: Musoro wenyaya yako ndeye Ropa rakaipa. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
HELENA TUR:Chaizvoizvo zita ndere Ropa rakaipa, asi isu takafunga kutamba nekusanzwisisika kuri pabutiro. Zviri Nhoroondo yenhema inonakidza yakaiswa muLas Médulas muna 1858. Ipo Civil Guard ichiendeswa munzvimbo kudzivirira kurwiswa kuna Isabel II, ndiani achapfuura ipapo munguva pfupi, vasikana vanobuda ropa vanotanga kuoneka muna El Sil. Izvi zvinoenderana nekusvika kwe nherera yechidiki ndiani achengete musikana matsi, mwanasikana wemuridzi webindu reruchi. Asi, mukuda kwake kumuchengetedza, zvishoma nezvishoma anopinda mumuromo mhumhi. Pfungwa yekutanga, pakavakirwa zvimwe zvese, ndiyo yaive chikonzero chemhosva idzi. Kubva ipapo, uye mukunyorazve kwakasiyana, mavara akaonekwa uye chinyorwa chakarukwa pamwechete.
HT: Semwana mudiki, sekuru vangu vaigara vachindipa mabhuku nezve mhuka. Ivo vaidzidzisa, hapana rondedzero. Ini ndinofunga bhuku rekutanga rerondedzero randakaverenga raive muunganidzwa wenyaya pfupi kusanganisira Muchinda anofara, naOscar Wilde, uye naye ndakachema senge kubvaruka kwemavhiki.
Chinhu chekutanga chandinorangarira kunyora chaive nemakore gumi nemashanu. Zvakare, kubva ku nyaya yenyaya, ipapo ndakavapfupikisa uye Ndakavashandura nenzira dzerudo. Zvinhu zvekurwisa kufinhwa semwana wega, ndinofungidzira.
HT: Ndinogara ndichidzokera ku Nietzsche, Vincent Valero, Mallarme, Rilke, Kafka, Tomasi murume, Jane Austen… Ndine zvakawanda zvekuverenga zvekare pane kutsvaga.
HT: Ndinoziva ichi: Ishe henry, ivo Mufananidzo waDorian Grey. Ndinozviona zvichinakidza.
HT: Para nyora, inodiwa ziva kuti ndine nguva pamberi. Ini handikwanise kunyora panguva dzakasarudzika, zvinonetsa kuisa chinyorwa chako zvekuti handidi chinhu chinondibvisa.
Kuverenga, chero kupi, pane ruzha, vanhu vanotaura kana chero chii zvacho. Ini ndinodambura kubva pasi zviri nyore.
HT: Para nyora, Ndinoita zvirinani kune iyo mangwanani (Ini ndinomuka kwekutanga) uye, hongu, muhofisi yangu uye nekomputa yakare. Ini handisi wekutora laptop chero kupi. Nekuti leer, hapana nguva yakaipa.
HT: Ndinoda zvese zvandinazvo unhu, mhando hachisi chinhu kunze kwekunyora chete. Asi, kuvashandisa, pane zvinhu zviviri zvandisingakwanise navo: -kuzvibatsira uye eroticism.
HT: Zvino ndakanga ndaverengazve Dzvuku uye Dema, Stendhal, asi ndakakanganisa kuverenga Mhondi isingaenderane, naCarlos Bardem, nekuti ini ndinofanira kuitisa hurukuro pakati pake naDomingo Villar.
Panguva imwecheteyo, ndiri rkunyora Ágatha Christie mhando yeruzivo, kunyangwe iine musanganiswa wemhando, yakaiswa muVilla de Ochandiano muna 1897. Ini nanhasi handizive kuti ichanzi zita rei.
HT: Vaparidzi, kunze kwekunge, makambani ayo vanoda kutengesa uye vanomanikidzwa kutsvaga iyo kuenzanisa pakati pebatsiro uye hutano. Ikozvino, panorama yazara nevanhu venhau vanopa mibairo yakanaka, asi, nerombo rakanaka, kune mikana yevausingazive (kuenderera kunoenderana nekutengesa, hongu).
Ndakagara ndanyora, asi Ndakafunga kushambadza makore mashoma apfuura nekuti ndiri mudzidzisi wepachikoro chepamusoro uye akada kutiza iyo yakauya pamusoro pedu. Zvakaoma kwazvo kuona kuti unosundirwa sei kubata vanhu vakangwara sekunge vakapusa kusvika vave mapenzi. Zvinorwadza zvikuru.
HT: Ini ndatora mukana weiyo mamiriro kukumbira imwe siya uye ndiri kupedza nguva ndichinyora. Ndine hunhu zvakanyanya uye kuvharirwa hakuna kundikanganisa zvakanyanya. Asi zvirokwazvo Ini handinzwe kuda kunyora chero chinhu nezve denda iri, Ini ndinofunga kuti kwatove nekuneta kwakawanda nezve kushomeka kwechinyakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Helena Tur. Kubvunzana nemunyori weRopa Rakaipa
Gumiguru. Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa